"भाग्यमानी छोरा" को भाग ३ मा छोराले फकाई फुल्याई आमासंग यौन सम्बन्ध राख्न सफल हुन्छ । उसले आफ्नो आमाको योनीभित्रै विर्य स्खलन गरि आमालाई भरपूर्ण आनन्द दिन्छ र आमासंगको पवित्र साइनोलाई बिर्सेर आफ्नो यौन जोडी बनाउन सफल हुन्छ ।
भाग्यमानी छोरो - भाग २ [Previous Episode] क्रमश…
मैले ढोकाबाट चियाएर हेरें । आमाले आफ्नो र्याप नाईटरोब अझै त्यहीँ लगाईरहनुभएको थियो र यतिखेर आमा हल्का सेक्सी टाईपको मिडनाईट मुभी हेरिरहनुभएको थियो । मेरो मस्तिष्कमा फेरी कुरा खेल्न थाल्यो । आमालाई आफ्नो प्यास पनि मेटाउनु परेको छ, सम्बन्धलाई गोप्य पनि राख्नु परेको छ, मलाई स्विकार्नु पनि भएको छैन, एकपटक आमालाई सम्झाएर पो हेर्ने हो की ? सुने बुझे अनुसार आफ्नै स्वास्नीसँग त सुहागरातमा चिक्नलाई माथा ठन्काउनु पर्छ भने एउटी आमा आफ्नै छोरालाई पुती किन तेर्साउँछिन् र ! मैले आफूलाई आमाको अगाडी ल्याउन माफी मागेर अगाडी बढ्ने निर्णय गरें र कोठाबाट निस्किएर आमा भएठाउँ पुगें । आमा एकोहोरो टि.भी. मा मस्त हुनुहुन्थ्यो । सोफामा बस्दा झण्डै म आमासँग टाँसिएर बसें अनि आमातिर फर्केर भनें “आमा, सरी है... आईन्दा म त्यस्तो गर्दिन...” “छोड्दे त्यो कुरा अब !... फेरी फेरी नसम्झा मलाई...” “भोलीदेखि नगरुला... तर एउटा कुरा सोध्छु नढाँटी भन्नु है त ?” “फेरी त्यही कुरा गर्न थाल्यो... ल भन् के सोध्ने हो ?” “गलत नै भएपनि (थुक निल्दै अड्किएर) एकछिन त गजब मजा आयो है...!” आमाको मुखमा हल्का मुस्कान आयो तर केहि बोल्नुभएन । मैले फेरी सोधें “भन्नु न आमा ! तपाईलाईं मजा आयो कि आएन ?” “मजा आयो भनेर हुन्छ र ? आमा छोराको बिचमा त्यस्तो गर्नु पाप पो हो त ?” “हाम्रो समाजले त्यसलाई स्विकार्दैन म मान्छु, तर के तपाईं भन्दै हिँड्नुहुन्छ र मलाई मेरो छोरोले यसो र उसो गर्यो भन्दै ? तपाईले त बुबाले गरेको कुरालाई पनि भन्न सक्नुहुन्न ? अब पाप र पुण्य भन्या त कसले पो देखेको छ र ? मरे पछी त डुमै राजा !” “तैले गर्न खोजेको भन्न खोजेको के हो ? तलाई त्यस्तो पात्तिन मन लाग्या भे केटीसाथी बनाएर जे मन लाग्छ गर् न ! म बुढिलाई के ताक्छस् र ?” आमालाई केहीबेर अझै कुरा गरे मनाउन सकिन्छ भन्ने ममा दृढ विस्वास पलाईसकेको थियो । मैले सहजै भनें “दिनभरी घरमानै बस्नुहुन्छ, अब नयाँ मान्छे घरमा धेरै आयो भने छिमेकिले त्यसैपनि कुरा काट्छन्, अब बुबाले तपाईलाई सन्तुष्टी दिने भनेको त्यस्तै हो ?” “तलाई के को चासो पर्या हो मेरो व्यक्तिगत कुरामा ...?” “मलाई थाहा छ तपाईंको दिनहुँको छटपटी, हरेक राती बुबाले तपाईको ईच्छा पुरा नगरेपछी यहाँ आउनुहुन्छ र राती यहीं निदाउनुहुन्छ, यसो गर्दा त हजुरको स्वास्थ्य पनि त बिग्रन्छ नि ?” “त्यसो भन्दैमा अब म सबै कुरा भुलेर तेरो कुराको पछी लागेर हिँडु त ? जे भएनि तँ मेरो छोरो होस् !” मैले आफ्नो हातले आमाको तिघ्रा मुसार्दै भनें “हेर्नुस् आमा ! घरको कुरा घरमै रहन्छ र तपाईको प्यास पनि राम्रैसँग मेटिन्छ ! कसैले थाहा नै पाउँदैन न समाजले न घरका कसैले...” कुरा टुंगिदासम्म मैले आफ्नो हातलाई आमाको र्याप नाईटरोबभित्र छिराएर आमाको तिघ्राबिचको कापेमा पुर्याईसकेको थिएँ ।
पुतीको आसपास मेरो हात पुग्दा आमाको सास बढिसकेको थियो र आमाले लामो सास लिनुभयो, मैले सोचे “कसले पो अब मलाई चिक भन्दै पुती थाप्छन् र !” मैले आमाको पुतीमा मेरो दाहिने हातको माझी औंला छिराएर खेल्न सुरु गरें । आमाले दुवै आँखा बन्द गरेर मुखले सि..ऽऽऽऽ.... गर्दै लामो सास लिनुभयो । त्यसपछी मैले आमालाई आफूतिर तानेर फेरी किस गर्दै आमाको र्याप नाईटरोबको फिता खोलिदिएँ । अनि किस सँगसँगै देब्रे हातका औंलालाई आमाको पुतीमा छिराएर खेल्दै दाहिने हातले आमाको गर्धनमा बेरें । झण्डै चार-पाँच मिनेटसम्म आमालाई मैले किस गरें । यो बिचमा मैले आमालाई र्याप नाईटरोबबाट अलग गरिसकेको थिएँ । मैले अचानकसँग आफ्नो पोजिशनलाई परिवर्तन गरेर सोफामुनि घुँडा टेकेर बस्दै आमाको दुई टाङ्ग फट्याएर पुतीमा आफ्नो जिब्रो लगाएँ अनि चाट्न थालें, आमा निकै दह्रो तरिकाले छटपटाउनुभयो र आमाले आफ्ना दुवै हातले मेरो टाउको समाएर पुतीमा गाड्नुभयो । मैले लपलप गर्दै आमाको पुती चुस्ने चाट्ने गर्दैगर्दा आमाको मुखबाट ठुलै सित्कार निस्क्यो, पुती चाट्दै गर्दा मैले घरिघरि आमाको बुब्स पनि खेलाउँदै गइरहेको थिएँ । निकैबेर पुती चाटेपछी मैले आमाको पुती छोडेर बुब्स चुस्न थालें । केहिछिनमै आमाले भन्नुभयो “महेन्द्र ! रुबीना निस्केली नि फेरी…” आमाको कुरा बिचैमा हात मुखमा लगेर बन्द गर्दै मैले आमालाई आफ्नो अँगालोमा उठाएँ र आफ्नो कोठामा लिएर गएँ अनि आमालाई मेरो खाटमा सुताउँदै मैले आफ्नो कट्टु खोलेर आमाको मुखमा दिएँ । आमाले सहजै मेरो लाँडोलाई हातले समाएर हल्का खेलाउँदै मुखमा लिनुभयो । आमाले मेरो लाँडो अतिनै सुन्दर तरिकाले चुस्न थाल्नुभयो, उसैपनि बुबासँगको उन्नाइस-बिस बर्षको शारिरिक सम्बन्धका कारण चिक्ने/चिकाउने कुरामा आमा अभ्यस्त नै हुनुहुन्थ्यो । लाँडोको छाला पुरै फर्काएर सुपारी मात्रलाई मुखमा राखेर जिब्रोले खेलाउँदा मलाई सिरिङ्ग सिरिङ्ग अनुभव हुन्थ्यो । म पनि समानान्तर रुपमा आमाको मुखमा लाँडो चुसाउँदै बेडमा पल्टिएँ र आमाको पुतीसँग साक्षात्कार गरें । आमाको मुखमा मेरो लाँडो थियो भने मेरो मुखमा आमाको पुती, आमा-छोराको चर्तिकला कुनै अभ्यस्त लोग्ने-स्वास्नीको यौन सम्बन्ध झैं चलिरहेको थियो ।
म आमाको पुतीको पत्र-पत्र चाटिरहेको थिएँ भने आमा मेरो लाँडोलाई आईसक्रिम/ललीपपको भाँती चाट्दै-चुस्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले पनि आमाको पुतीको टिसीलाई मुखमा लिएर खेलाउँदै पुतीको प्वालमा औंला छिराएर खेल्दै गएँ । निकैबेरपछी आमाले मेरो लाँडो छोड्नुभयो र भन्नुभयो “महेन्द्र ! छिराईदे मेरो पुतीमा तेरो लाँडो... चिक्दे तेरो आमालाई...” अनि मेरो मुखमा मुख जोडेर चुस्न थाल्नुभयो । मैले पनि आमालाई साथ दिदैं किस गर्दाकै आसनमा बेडमा सुताएँ र आमाको पुतीमा लाँडो छिराउने कोशिस गरें, छिरेन तर आमा आफैंले मेरो लाँडो समाएर आफ्नो पुतीको द्वारमा लैजानुभयो र लामो सित्कार लिँदै छिराउनुभयो । मलाई मेरो लाँडो तातो आगोको मुङ्ग्रामा छिरेको जस्तो भान भयो । त्यसपछी आमाले मेरो चाकलाई विस्तारै अगाडी-पछाडी गराउन थाल्नुभयो । आमाको त्यो क्रमलाई गति प्रदान गरेर मैले निरन्तरता दिएँ र आमाको पुतीमाथी मच्चिन थालें । त्यसरी आमाको पुतीमा मच्चिंदा आमाको बुब्स बडो स्वतन्त्र रुपमा छुट्टिउँलाझैं गरि हल्लिरहेका थिए । आमाको पुतीभित्र मेरो लाँडो प्वाँच... प्वाँच... गर्दै मच्चिरहेको थियो भने गेडा आमाको पुती आसपासको भागमा ठोक्किँदा हल्का हल्का फ्याट… फ्याट... पनि गरिरहेको थियो, कता कता मेरो लाँडो टनटनिएर पोलेको जस्तो अनि दुखेको जस्तो पनि भइरहेको थियो । यस्तो बेलामा लाँडोको पीडा सम्झेर चिक्न बन्द गरेंभने म सधैं पछी पर्नेछु भन्ने लाग्यो र पीडा हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो चिकाईको गतिलाई कायमै राखें, आमाको मुखबाट स्वाँऽऽऽऽ...स्वाँऽऽऽ... गर्दै निस्कन थालेको सित्कारले चरम रुप धारण गर्दै गईरहेको थियो र आवाज अलि बढी चर्को हुँदै गईरहेको थियो । साथमा आमाले “अलि बेसरी... फोर्दे बाबु मेरो पुती... च्यातिदे मेरो पुती... आँ ऽऽऽ..अँऽऽऽ... उहुँऽऽऽ... अझै भित्र... चिक मेरो छोरा... आँऽऽऽ… अँऽऽऽ... उहुँऽऽऽ... पुरै लाँडो छिराइदे मेरो पुतीमा आँऽऽऽ… अँऽऽऽ... उहुँऽऽऽ... प्यास मेटाईदे तेरो आमाको... आँऽऽऽ… अँऽऽऽ... उहुँऽऽऽ... गेडैसित छिराईदे मेरो पुतीमा आँऽऽऽ… अँऽऽऽ... उहुँऽऽऽ...” गर्दै तलबाट चाक उचालेर मलाई साथ दिन थाल्नुभयो । जब मैले आमाको पुतीबाट लाँडो निकालें, हत्तपत्त आमाले मेरो लाँडो मुखमा लिइकन चुस्न चाट्न थाल्नुभयो । केहिबेर चाटेपछी मलाई लाँडो हेर्न लगाउँदै भन्नुभयो “फर्स्ट टाइम र’छ मेरो छोरोको लाँडो ददारिएको जस्तो भा’को छ...” अनि बेडमा आधा ज्यान सुताएर कुकुरको जस्तो गरि बस्दै भन्नुभयो “चिक्दे बाबु मलाई कुकुर्नी बनाएर चिक... आज म सम्पूर्ण रुपमा तेरो हुन चाहन्छु... चिक् मलाई तलाईं मन लागेजसरी चिक्...” मैले लाँडोलाई पछाडीबाट आमाको पुतीमा छिराएर चिक्न थालें । यसरी आमालाई चिक्दा आमाको पुती अघिको भन्दा अलि टाइटजस्तो अनुभव मलाई भईरहेको थियो, निकैबेरसम्म आमालाई त्यसरी चिकेपछी आमाको पुतीबाट निकै नै पानी छुट्न लाग्यो र आमाले भन्नुभयो “आहऽऽऽ.... म त गएँ केटा... अम्ऽऽऽ.... धेरै वर्षपछाडी मेरो पुतीले धित मर्नेगरि लाँडोको स्वाद चाख्न पायो... धन्यवाद् छ छोरा तँलाई...” तैपनि मैले आमाको पुतीमा दनादन लाँडो पेलिरहें र अन्तमा लाँडो टनटनिएर फुसी छोड्ला जस्तो भएपछी मैले आमालाई भनें “आमाऽऽऽ.... मेरो पनि झर्ने बेला भयो... म तपाईको मुखभित्र झार्न चाहन्छु...” मैले त्यति भन्न नपाउँदै आमाले हत्तपत्त मेरो लाँडो आफ्नो पुतीबाट छुटाउँदै मेरो लाँडोको सामुन्नेमा आउनुभयो र मैले आमाको अनुहार अगाडी एउटा हातले आफ्नो लाँडोलाई समातेर छोल्न थालें भने अर्को हातले आमाको गालालाई दुवैतिरबाट चेपेर मुखलाई खुला पार्दै भनें “मेरो लाँडोले आज मेरो परीको मुखभित्रै वान्ता गर्छ... खै मुखभित्र लिनुस् मेरो लाँडोलाई..” आमाले सहजै मेरो लाँडोलाई मुखभित्र छिराउनुभयो र मैले आमाको टाउकोलाई समाएर आमाको मुखलाई नै चिकेजस्तो गर्न थालें । छिनमै मेरो लाँडोबाट आजको दिनको दोस्रो पटक फुसी झर्यो र आमाको मुख भरिभराउ भयो, आमाले फुसीलाई मुखमा आँ गरेरै मलाई देखाउनुभयो । मैले आमालाई उठाँए र आमाको पुतीमा औंलाछिराउँदै अर्को हातले कपालको चुल्ठो समातेर माथी फर्काउँदै भनें “आज मेरो फुसीको स्वाद चाख्नुस् !” अनि आमाको मुखमा मुख टाँसेर बन्द गरिदिदैं आमाको पुतीलाई जोडजोडले खेलाउँदै रहें । त्यसरी आमालाई फुसी निल्न बाध्य पारेपछी आमाको निकै असजिलो गरि फुसी निल्नुभयो तर वान्ता आउला झैं गर्दै जोडजोडले वाक्क वाक्क गर्नुभयो, मैले आमालाई अझैपनि चुल्ठोमा समातेर माथी नै फर्काएर आमाको पोका निचोर्न थालें । केही समयपछी आमा सहज अवस्थामा फर्कनुभयो । मैले आमालाई बेडमा हुत्याएर उत्तानो पारिदिँए र आमासँगै बेडमा पल्टिएँ । आमा उठेर जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले आमाको हात समाएर बेडमै सुताउँदै भनें “आजबाट तपाईं मेरो स्वास्नी ! म मन लागेको बेलामा तपाईलाई चिक्छु... यहीं सुत्नुस् !” “मेरो कपडा बाहिरै छ मोरा !” “हुन दिनुस् न ! बिहान म जगिङ्गमा जाने बेलामा लगाउनुहोला !” अनि फेरी आमाको मुखमा मुख जोडेर किस गर्न थालें, आमाले पनि मलाई साथ दिनुभयो । मैले आमालाई पछाडीबाट च्यापेर सुतिरहें, गजबको चिकाईपछी कुन बेला निद्रा लागेछ थाहै भएन ।
एकैपटक बिहानको सवा चार बजेतिर मेरो निद्रा खुल्यो, मैले आफ्नो छेउमा हेरें । आमा मस्तले सुतिरहनुभएको थियो, घडी हेरेर समयको अन्दाज गर्दै मैले आमाको पोका समाएर खेलाउन थालें । आमा अझैपनि उठ्नुभएन, निकैबेर पोका खेलाएपछी मैले आमाको पोकालाई मुखमा लिएर चुस्न थालें, निकै उत्तेजनामा आएपछी मात्र आमाले आँखा उघार्नुभयो र भन्नुभयो “कति जोश चढेको हो मेरो नाठोलाई...” मैले आमालाई भनें “लौ हेर्नुस् आमा तपाईको नाठोले अब के गर्छ !” अनि लाँडो समाएर आमाको मुखमा छिराएर आमालाई जबरजस्ती चुस्न लगाएँ । आमाले मजाले मेरो लाँडो चुसिदिनुभयो र तिन-चार मिनेटमै मेरो लाँडोलाई मुखबाट झिकेर मेरो मुखमा आफ्नो मुख जोड्दै मलाई मजाले चुम्बन गर्नुभयो । मैले यादै गरिन आमाले मलाई किस गर्दागर्दै मेरो माथी चढेर लाँडोलाई पुतीभित्र छिराइसक्नुभएछ र मेरो माथी मजाले उफ्रन थाल्दै भन्नुभयो “तँ जाँठाले के गर्छस् जे गर्छु मै गर्छु...” मैले पनि तलबाट आमाको पोका निचोर्दै आमालाई साथ दिन थालें । निकैबेरसम्म आमा माथी र म तलबाट चिकाचिकी गर्दागर्दै आमा हल्का थाक्नुभएजस्तो लाग्यो र मैले आमालाई उल्टाएर बेडमा सुताउँदै म आमाको माथी आइपुगें र आमालाई ओंठमा किस गरें अनि आमाको पुतीबाट लाँडो झिकेर आमालाई चुम्बन गर्दै मुखदेखि पुतीसम्म आईपुगेर आमाको टिसीलाई मजाले चाटें । आमाले आफ्नो आँखा बन्द गर्दै भन्नुभयो “तेरो बुबा उठ्ने बेला हुन लाग्यो छिटो गर... फेरी थाहा पाउनुभयो भने बरबाद हुन्छ...” “लौ त त्यसोभए…” भन्दै मैले फेरी आमाको पुतीमा लाँडो छिराएर दुबै हातले पोका समाएर निचोर्दै आमालाई चिक्न थालें । निकैबेर आमाको पुतीमा चिकेपछी मैले भनें “भित्रै झार्दिउ ?” आमाले भन्नुभयो “ढुक्कले झारिदे... तँ डराउनु पर्दैन... हामीले नियोजन गरिसकेका छौं !“ मैले आमाको पुतीमै फुसी छोडिदिएँ र आमाको ओंठमा ओंठ जोडेर निकैबेर किस गरें । त्यसपछी उठेर मैले आफ्नो कपडा लगाएँ अनि बाहिर निस्केर आमाको र्याप नाईटरोब समातेर भित्र छिर्दै आमालाई लगाईदिएर भनें “आजदेखि हरेक बेलुका तपाईं मेरो रानी बनेर मेरो बिस्तरामा मेरो लाँडोलाई स्वागत गर्नुहोस् है त ?” “हस् मेरो राजा नाठो छोरा मेरो चिकुवा छोरा...” अनि मलाई किस गर्नुभयो र मेरो कोठाबाट निस्केर माथी आफ्नै कोठातिर लाग्नुभयो । मैले घडी हेरें, भर्खर पाँच बज्दै थियो । आमा र्याप नाईटरोब लगाइसकेर किचनतिर छिर्नुभयो, केहिबेरमै बुबा तल आउनुभयो “सुमीना !” भन्दै, आमाले “के भयो ?” भन्दा बुबाले “कहाँ गएकी थियौ भनेर नि ?” त्यसपछी मन्द स्वरमा आमाले भन्नुभयो “अब तपाईसँग त सुतेर केही फाईदा छैन ज्यानलाई जिस्क्याउनु भन्दा अर्को कोठामा गएको नि ? (केहिबेरको मौनतापछी) चिया पिउनुहुन्छ...?” बुबाले “भो चिया त पिउँदिन बरु एक ग्लास कागती पानी ख्वाउ त !”
भाग्यमानी छोरो : भाग ४ [Continue Reading]
भाग्यमानी छोरा : भाग ३ - 'आमा छोरा बिचको सहबास' 2017-09-02T13:46:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाग्यमानी छोरा : भाग ३ - 'आमा छोरा बिचको सहबास'